Fikojakojana Alimony - Alimony Fanaovana Kajy Alimony Fanaovana Kajy Austria - Alemaina mpisolovava an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Fikojakojana Alimony - Alimony Fanaovana Kajy Alimony Fanaovana Kajy Austria
Raha ny fanambadiana no efa nisara-panambadiana, sy miavaka, tsy ny fisaraham-panambadiana dingana ara-bola ny asaAmin'ny toe-javatra maro, ny Olana tsy tonga, fa farafahakeliny ny iray amin'ny Mpiara-miombon'antoka ara-bola dia afaka miaina tsy miankin-doha. Fikojakojana: ny vaovao Rehetra momba ny alimony sy ny fikojakojana ny vola any Aotrisy, ara-dalàna sy ny soso-kevitra manan-danja ho hitanao eto. Mba hahazoana ny fari-piainana ny zaza sy ny Ex-Mpiara-miasa, amin'izao Fotoana izao, ny foto-kevitra ny alimony ary fanohanana ny ankizy. Ny mety anivon'ny fikojakojana ny vola aloa, dia misy ny karazana fitsipika, izay azo ahitsy amin'ny ara-dalàna ny raharaha, mora foana ny misy Toe-javatra. Indrindra indrindra, ny isa sy ny taona ny ankizy dia fanapahan-kevitra nandritra ny efa nampoizina habetsahan'ny Alimony. Alimony mety ho nametraka any Aotrisy eo amin'ny mpivady ao ny zava-nitranga ny fisarahana na ny fisaraham-panambadiana. Tsy misy alimony, na ny fikojakojana ny vola ny fifanekena fehezin'ny, ary dia ho tapa-kevitra ny rantsana mpanao lalàna. Ny fikarakarana fanaovana kajy dia afaka manao kajy fotsiny ny atsy ho atsy, ny ankizy fanohanana ny fandoavam-bola na alimony ao ny zava-nitranga ny fisarahana na ny fisaraham-panambadiana an-tserasera.
Ao ny raharaha fisaraham-panambadiana dia tsy voatery ho nandoa ny fikojakojana.
Ny vola sy ny fandoavam-bola miankina amin'ny famoahana karazana. Any Aotrisy, ny raharaha mitranga fa samy fisaraham-panambadiana mpiara-miasa amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy fiaraha-mientana ifampizarana ny fikojakojana ny vola. Izany dia atao ao ny Endriky ny fifanekena Tsy misy fifanarahana tonga ao an-kery, ny antenimiera mpanao lalàna ny adidy ny lalàna amin'ny fandoavana ny fikojakojana. Mety midika izany fa afa-tsy ny fisaraham-panambadiana mpiara-miasa ao amin'ny adidy mba handoavana ny hafa ny fisaraham-panambadiana mpiara-miasa fikojakojana. Ny fanaovan-dalàna ny kajy ihany koa ny vola ho fikolokoloana. Toy ny fototry ny kajy isam-bolana ny vola miditra aterineto ny Mandoa manolo-tena, ny fisaraham-panambadiana sy ny mpiara-miasa rehetra isan-karazany manokana vola. Raha ny Fiovana eo amin'ny fidiram-bola hitranga aorian'ny fisaraham-panambadiana na ny kajy alimony, dia manolo-tena ho amin'ny fisaraham-panambadiana, ny mpiara-miasa koa mba tatitra izany manodidina. Ny fototry ny vaovao ara-bola ny toe-draharaha, ny recalculation ny Alimony. Tsy afa-tsy ny raharaha fisaraham-panambadiana, ny fikojakojana mitranga adidy. Raha ny tokony ho Roa ny ankizy, dia tsy maintsy ho samy nanohana ny alalan ny ankizy fanohanana ara-bola. Eto, ny fitsipika tsotra, ny zaza na ny ankizy dia tsy anisan'ny manaraka ity dia mihatra: ny ray aman-dreny izay ao an-tokantrano ny zaza na ny ankizy ny fiainana, mandray avy amin'ny ray aman-dreny izay ao an-tokantrano Ny fiainana, ny vola, ny fikojakojana, ny antsoina hoe alimony. Alimony mba ho entina avy mba hahazoana antoka fa ny ilaina ny ny zaza na ny ankizy dia rakotra, izy ireo dia toy izany no omena an-trano, ny fitafiana, ny sakafo, sns. Ny filazana ho an'ny alimony dia, ao amin'ny ara-dalàna ny raharaha, ka ny taona ny zaza. Nianatra ny ankizy, na izany aza, na dia tsy nandray izany noho ny antony hafa, ny mahavita tena, tsy maintsy mandoa vola ny mpandoa ny alimony, ny habetsaky ny vola ho any ny fahavitan'ny fianarana na hatramin'ny fahaleovan-tena ny zanakao. Raha vao ny zaza miaina ao anatin'ny tsy miankina ao an-tokantrano na ilaina hianarana izany, fa ny mpandray ny alimony. Midika izany fa na ny ray na ny reny, toy izany koa ny teo aloha, fianakaviana, mbola manana ny filazana ny vola.
Ny atsanga ny vola azo atao ao anatin'ny ny fidiram-bola ny hetra dia hiverina na mandoa ny hetra onitra ny hetra birao mba milaza izany.
Ny habetsahan'ny alimony dia toy ny vola ny fikojakojana fa dia ara-dalàna any am-ponja. Amin'ny fanajana alimony, fa Ny fampisehoana amin'ny ray aman-dreny na ny ray aman-dreny toy ny fototry ny kajy. Ankoatra ny fitambaran'ny isam-bolana ny vola miditra aterineto, taona ny zaza milalao eo, ny amin'izao fotoana izao ny Fanabeazana sy fiofanana arak'asa, ary koa angamba ny toe-bola, ny anjara asa manan-danja. Amin'ny ankapobeny, dia mazava, na izany aza, ny fomba ambony ny fidiram-bola amin'ny fikojakojana mpitrosa ny ray aman-dreny, ny ambony ny alimony.
Ho foana ny mety Aliment hahavony, mampihatra any Aotrisy, maro ny adidy tahan'ny. Izany no voalohany indrindra ny taona ny zaza toy ny sisintany Ny zaza ao amin'ny sokajin-taona ny ny enin-taona, alimony ny habetsaky ny enina ambin'ny folo isan-jato ny fitambaran'ny vola tokony haloa.
Tamin'ny taona enina amin'ny folo taona, ny isan-jato mampitombo ny valo ambin'ny folo isan-jato. Eo folo sy dimy ambin'ny folo taona ny alimony ny hahavony dia roa-polo isan-jato ny vola miditra. Avy ny faha dimy ambin'ny folo taona, avy ny ankizy na ny Aliment mpandray ny ankizy fanohanana eo amin'ny habetsaky ny roa amby roa-polo isan-jato net vola miditra isam-bolana. Ankoatra ireo tetika, ilay antsoina hoe lafo vidy misy na Playboy sisintany. Izany no miseho rehefa ny ray aman-dreny mendrika manana fidiram-bola ambony. Io fetra hanan-kery raha toa ka ampiharina amin'ny ny isan-jato miteraka fikojakojana avo be. Ny rendrarendra no ampiasaina mba hamerana ny fikajiana ny alimony dia ho voafetra amin'ny fandoavana ny alimony ny Roa roa sy tapany ny fotoana azo ampiharina ny taha. Eto, ny rendrarendra fetra indray ihany ny zavatra sarobidy izay mety ho nihoatra amin'ny toe-javatra sasany ihany koa. Satria ny rendrarendra no ampiharina ferana ho iray etsy ambony eo ho eo ny fidiram-bola, no tsy tonga any amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra. Ny tena kajy ny alimony any Aotrisy dia tsy maintsy ho tsy miankina atao. Ny fanapahan-kevitra ny hahavony dia atao na ny fitsarana, na ny miaro ny ankizy asa. Tsy izany no iray volana, fa isan-taona ny karama slips takiana.
Ny hafa rehetra Ny antontan-taratasy ny ray aman-dreny, na eo an-toerana omena, na amin'ny alalan'ny Fikarohana ao amin'ny Aterineto tamin'ny zava-nitranga.
Raha tianao, dia afaka manao kajy out-of-ny fitsarana, ny Aliment vola amin'ny fitaovana maimaim-poana ny fikojakojana ny solosaina. Ny toy izany no-azo Vaovao manompo ihany no ho toy ny tsy manan-kery mialoha vaovao, ary mety tsy hitovy amin'ny farany avy any amin'ny tena fotony. Toy izany koa ho toy ny fandoavana ny fikojakojana amin'ny karama na fiovana eo amin'ny Fananany, ny fitsarana nampahafantatra sy ny recalculation dia ho tompon-kevitra. Raha ny fandoavana ny ray aman-dreny no tsy milalao ny anjara ny Aliment adidy, dia azo avy amin'ny fitsarana. Ao ny raharaha ny zava-tsarotra alimony mba ho atsangana amin'ny alalan'ny karama garnishment. Ny manokana Seho na manokana no mitranga, na ny Aliments mendrika ny ray aman-dreny no tompon'andraikitra ara-bola ho amin'izany. Ohatra, mety lany ianao fandaniana ho an'ny dingana, na fitsaboana na fanasitranana fanafody. Services toy ny momba ny sekoly-kerinandro, na izany aza, ny adidy-ny antoko voatery mandoa ny ray aman-dreny. Toy izany koa tahaka ny tamin'ny raharaha iray miavaka Aliment, na ny fikojakojana ny adidy, mety ho nandoa ny vola toy mialoha. Amin'ity tranga ity, ny mpitory dia tsy maintsy manana ny filazana ny vola ho fikolokoloana, ary izany dia mampiseho amin'ny alalan'ny ponenana na ny didy avy amin'ny fitsarana ny tsirairay vola. Ny fikolokoloana tsy mety na tsy tanteraka nandray karama, ary koa ny famonoana ny fandoavam-bola dia ho very fanantenana. Ao ny raharaha ny ankizy, ny ankizy mety tsy mbola nahatratra ny faha-valo ambin'ny folo taona. Ankoatra izany, bebe kokoa ny loharanom-baovao sy ny Antsipirihany izay ilaina, izay no mahatonga ny mialoha dia ilaina.
Tsy Manan-Kialofana - Asa Ara-Tsosialy Nuremberg